မဟာသတိပဋ္ဌာန် ၄ ပါးနှင့် အကျိုး	Posted on January 1, 2010	by mettayate သမထက ဉာဏ်သေ၊ ၀ိပဿနာက ဉာဏ်ရှင်။
1) ၀င်သက်ထွက်သက်ကို ရှုနည်း ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု ရှုဆင်ခြင်ပုံသည်ကား – ဤသာသနာ၌ ရဟန်းတစ်ပါးသည် တော၊ တောင်၊ သစ်ပင်ရင်း စသော ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တစ်ခုခုသို့ ချဉ်းကပ်၍ တင်ပျဉ်ခွေထိုင်ပြီး ကိုယ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ထား၏။ သတိကိုလည်း ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံသို့ ရှေ့ရှုတည်စေ၏။ ယင်းသို့တည်စေပြီးနောက် ထိုရဟန်းသည် သတိရှိလျက်သာလျှင် ၀င်သက်လေကိုရှူသွင်း၏။ သတိရှိလျက်သာလျှင် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်၏။ ရှည်ရှည်ရှူသွင်းလျှင် ရှည်ရှည်ရှူသွင်းသည်ဟု သိ၏။ ရှည်ရှည်ရှူထုတ်လျှင် ရှည်ရှည်ရှူထုတ်သည်ဟု သိ၏။ တိုတိုရှူသွင်းလျှင် တိုတိုရှူသွင်းသည်ဟု သိ၏။ တိုတိုရှူထုတ်လျှင် တိုတိုရှူထုတ်သည်ဟု သိ၏။ ၀င်သက်လေ၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားသိလျှက် ရှူသွင်းမည်ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ ရုန့်ရင်းပြင်းထန်သောဝင်သက်ကို ငြိမ်းအေးစေလျက် ရှူသွင်းမည်ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ ရုန့်ရင်းပြင်းထန်သောထွက်သက်လေကို ငြိမ်းအေးစေလျက် ရှူထုတ်မည်ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။
သေချာမှတ်ရမှာက ၀ိပဿနာတရားမှာ ဟိုဟာတွေမြင်တာ၊ ဒီဟာတွေမြင်တာ၊ ၀င်းခနဲ လင်းခနဲဖြစ်တာ ကောင်းကင်မြောက်တတ်သလိုဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ မရှိဘူး။ သဘောတရားအမှန်ကိုသိပြီး ကိလေသာတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါး ကုန်ခမ်းသွားတာမျိုးပဲရှိတယ်။ ဟိုဟာမြင် ဒီဟာမြင်တာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေဖြစ်ချင်တာ၊ သူများထက်အကြာကြီးပိုထိုင်နိုင်သူဆိုပြီး အထင်ကြီးခံချင်တာကိုက လောဘတစ်မျိုးပဲ။ တစ်နာရထိုင်ချိန်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲထိုင်ပါ။ ထိုင်နေရင်းလည်း အိပ်ငိုက်မနေပါနဲ့။ အိပ်ငိုက်တယ်ဆိုတာ ထိန၊ မိဒ္ဓဆိုတဲံ ကိလေသာဖြစ်သွားတာ။ လူအထင်သေးခံရမှာဆိုပြီး ပေပြီးထိုင်နေရင် လောဘကိလေသာက ကိုယ်သတိမထားခင်မှာပဲ ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်သွားပြီ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ကိလေသာတွေကစပြီး စိတ်သဏ္ဌန်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင် သတိထားနေတာ၊ အားထုတ်နေတာကိုက သမ္မာသတိနဲ့ သမ္မာဝါယာမဂ္ဂင်ကို ပွားများနေတာပါပဲ။
2) ဣရိယာပုတ်လေးပါး ရဟန်းတစ်ပါးသည်ကား သွားရင် သွားသည်ဟု သိ၏။ ရပ်ရင် ရပ်တယ်လို့ သိ၏။ ထိုင်လျှင် ထိုင်သည်ဟု သိ၏။ လျောင်းရင် လျောင်းတယ်ဟု သိ၏။ တည်ရှိနေတိုင်းသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ကိုယ်၏တည်နေပုံကို သိ၏။
တဖန် ထိုရဟန်းသည် ရှေ့သို့တိုးခြင်း၊ နောက်သို့ဆုတ်ခြင်း တို့၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။ တည့်တည့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင်းငဲ့ခြင်းတို့၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။ ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်းတို့၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။ သပိတ်သင်္ကန်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ခြင်း၊ သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ နိုးခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းတို့၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။
တဖန် ထိုရဟန်းသည် အောက်ခြေဖ၀ါးမှစ၍ အထက်ဆံပင်ဖျားအထိ အရေပြားဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော ဤကိုယ်ကို မစင်ကြယ်သော အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်ဟူ၍ ရှုဆင်ခြင်၏။ ဤကိုယ်၌ ဆံပင်၊ မွေးညှင်း၊ လက်သည်းခြေသည်း၊ သွား၊ အရေ၊ အသား၊ အကြော၊ အရိုး၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ၊ အညှို့၊ နှလုံး၊ အသည်း၊ အမြှေး၊ အဖျဉ်း၊ အဆုတ်၊ အူမ၊ အူသိမ်၊ အစာသစ်၊ အစာဟောင်း၊ ဦးနှောက်၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ ပြည်၊ သွေး၊ ချွေး၊ အဆီခဲ၊ မျက်ရည်၊ ဆီကြည်၊ တံတွေး၊ နှပ်၊ အစေး၊ ကျင်ငယ် အားဖြင့် (၃၂) ကောဋ္ဌာသ အစုအဝေးများသာ ရှိ၏ဟူ၍ ဆင်ခြင်၏။
တဖန် ထိုရဟန်းသည် တည်နေတိုင်းထားရှိတိုင်းသောကိုယ်ကို ဓါတ်သဘောအားဖြင့်ဆင်ခြင်၍ ဤကိုယ်၌ မြေဓါတ် ( မာသဘော၊ ပျော့သဘော)
6) လူသေကောင်ကိုးမျိုးနဲ့ရှုနည်း တစ်ဖန် ထိုရဟန်းသည် သုဿာန်၌စွန့်ပစ်ထားသော သူသေကောင်အမျိုးမျိုးကို ရှု၍ မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်၏။
ဆင်းရဲမှုကိုခံစားလျှင် ဆင်းရဲမှုကို ခံစား၏ဟုသိ၏။ ဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်၊ ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်သောဝေဒနာကို ခံစားလျှင်လည်း ဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်၊ ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်သောဝေဒနာကို ခံစား၏ဟုသိ၏။ တွယ်တာမှုနှင့်ယှဉ်သော ချမ်းသာမှုကို ခံစားလျှင် တွယ်တာမှုနှင့်ယှဉ်သော ချမ်းသာမှုကို ခံစားသည်ဟုသိ၏။
ဤသို့အားဖြင့် ထိုရဟန်းသည် မိမိသန္တာန်၌ဖြစ်သော ခံစားမှုတို့၌ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးသန္တာန်၌ဖြစ်သော ခံစားမှုတို့၌ဖြစ်စေ ယင်းနှစ်မျိုးလုံး၌ဖြစ်စေ ခံစားမှုဟု အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ ခံစားမှုတို့၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ ခံစားမှုတို့၌ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ ခံစားမှုတို့၌ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ အသိဉာဏ်ဖြစ်ရန် တဖန်သတိရရန်အတွက်သာလျှင် ခံစားမှုသည်ရှိ၏ဟူ၍ သတိကိုထင်စွာထား၏။
စိတ်၌စိတ်ဟု ရှုဆင်ခြင်ပုံကား – သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတစ်ပါးသည် တပ်မက်မှုရှိသောစိတ်ကို တပ်မက်မှုရှိသောစိတ်ဟု သိ၏။ တပ်မက်မှုမရှိသောစိတ်ကို တပ်မက်မှုမရှိသောစိတ်ဟု သိ၏။
ဤသို့ဖြင့် ထိုရဟန်းသည် မိမိစိတ်၌ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးတို့၏ စိတ်၌ဖြစ်စေ၊ ယင်းနှစ်မျိုးလုံး၌ဖြစ်စေ စိတ်ကိုအဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ စိတ်၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ စိတ်၌ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ စိတ်၌ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ အသိဉာဏ်ဖြစ်ရန် တဖန်သတိရရန်အတွက်သာလျှင် စိတ်သည်ရှိ၏ဟူ၍ သတိကိုထင်စွာထား၏။
မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မှာ ဓမ္မနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် ၁) နီဝရဏပဗ္ဗ စေတသိက်တို့ကို ရှုရပုံ
၃) အာယတနပဗ္ဗ ရုပ် နာမ် ရှုရပုံ ၄) ဗောဇ္ဈင်္ဂပဗ္ဗ နာမ်ရှုရပုံ
1) နီဝရဏငါးပါးကို ရှုပုံ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု ဆင်ခြင်ပုံကား ဤသာသနာ၌ ရဟန်းတစ်ပါးသည် စိတ်ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးတတ်သော နီဝရဏတရားတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။
မိမိသန္တာန်၌ ကာမဆန္ဒ ရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ကာမဆန္ဒ ရှိ၏ ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ ကာမဆန္ဒ မရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ကာမဆန္ဒ မရှိ၏ ဟု ထင်ရှားသိ၏။ မဖြစ်သေးသော ကာမဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမဆန္ဒကို ပယ်ခြင်း၊
မိမိသန္တာန်၌ စိတ်ဆိုးခြင်း ရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ စိတ်ဆိုးခြင်း ရှိ၏ ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ စိတ်ဆိုးခြင်း မရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ စိတ်ဆိုးခြင်း မရှိ၏ ဟု သိ၏။
မိမိသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း ရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း ရှိ၏ ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း မရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း မရှိ၏ ဟု သိ၏။
မိမိသန္တာန်၌ ပျံ့လွင့်ပူပန်ခြင်း ရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း ရှိ၏ ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ ပျံ့လွင့်ပူပန်ခြင်း မရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း မရှိ၏ ဟု သိ၏။
မိမိသန္တာန်၌ တွေးတောယုံမှားခြင်း ရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ တွေးတောယုံမှားခြင်း ရှိ၏ ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ တွေးတောယုံမှားခြင်း မရှိလျှင် ငါ၏အတွင်းသန္တာန်၌ တွေးတောယုံမှားခြင်း မရှိ၏ ဟု သိ၏။
ဤကား ရုပ်တည်း။ ဤကား ရုပ်၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။
ဤကား ခံစားမှု ဝေဒနာ တည်း။ ဤကား ခံစားမှု ဝေဒနာ ၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။
ဤကား မှတ်သားမှု သညာ တည်း။ ဤကား မှတ်သားမှု သညာ ၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။
ဤကား စေ့ဆော်အားထုတ်မှု သင်္ခါရ တည်း။ ဤကား စေ့ဆော်အားထုတ်မှု သင်္ခါရ ၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။
ဤကား သိမှု ၀ိညာဉ် တည်း။ ဤကား သိမှု ၀ိညာဉ် ၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။
မျက်စိကိုလည်း သိ၏။ အဆင်းရူပါရုံကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။ မဖြစ်သေးသော သံယောဇဉ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊
နား ကိုလည်း သိ၏။ အသံ သဒ္ဒါရုံ ကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။
နှာခေါင်း ကိုလည်း သိ၏။ အနံ့ ဂန္ဓာရုံ ကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။
လျှာ ကိုလည်း သိ၏။ အရသာ ရသာရုံ ကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။
ကိုယ် ကိုလည်း သိ၏။ အတွေ့အထိ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ ကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။
မနောဝိညာဉ် ကိုလည်း သိ၏။ အတွေးအာရုံခေါ် ဓမ္မာရုံ ကိုလည်း သိ၏။ ယင်းနှစ်ပါးကို အစွဲပြု၍ တပ်မက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်းစသော သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိ၏။
တဖန် ထိုရဟန်းသည် ဗောဓိဉာဏ်၏ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော တရားခုနစ်ပါးတို့၌ တရားသဘော ဟု အဖန်ဖန်ရှု၏။ မိမိသန္တာန်၌ ဗောဓိဉာဏ်၏ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော သတိရှိလျှင် ရှိ၏ ဟု သိ၏။
မဖြစ်သေးသော သတိဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော သတိ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော စိစစ်မှုဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိစစ်မှုဉာဏ် ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော အားထုတ်မှု ၀ီရိယ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အားထုတ်မှု ၀ီရိယ ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော နှစ်သက်မှု ပီတိ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော နှစ်သက်မှု ပီတိ ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော ငြိမ်းအေးမှု ပဿဒ္ဓိ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော ငြိမ်းအေးမှု ပဿဒ္ဓိ ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော တည်ငြိမ်မှု သမာဓိ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော တည်ငြိမ်မှု သမာဓိ ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
မဖြစ်သေးသော လျစ်လျူရှုမှု ဥပေက္ခာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျစ်လျူရှုမှု ဥပေက္ခာ ၏ တိုးပွားပြည့်စုံလာပုံတို့ကိုလည်း မြင်၏။
တဖန် ထိုရဟန်းသည် သစ္စာလေးပါးတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှု၍နေ၏။ ဤကား ဆင်းရဲတည်း။
ဆင်းရဲငြိမ်းရာ အမှန်တရားဟူသည် – မှန်သော အမြင်
ဤသို့အားဖြင့် ထိုရဟန်းသည် မိမိသန္တာန်၌လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးသန္တာန်၌ လည်းကောင်း၊
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဒွိဟိတ် တိဟိတ် ခွဲခြားနည်းနှင့် ဒွိဟိတ် တိဟိတ် ဖြစ်ပုံ
အောင်ကိုကို says:	March 11, 2011 at 6:04 am	သာဓုခေါ်ပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု